Semalt Islamabad Expert: Moa ve ny tranokalan'ny e-commerce misy anao?
Ny fahaiza-mandinika fikarohana fikarohana (SEO) dia fitsipika ilaina raha ny Internet sy marketing ara-nomerika. Ny sehatra media sosialy dia vao haingana ny lohahevitra ifanakalozan-kevitra noho ny fiovaovan'ny fifamoivoizana sy ny habetsahan'ireo mpitsidika maro.
Michael Brown, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , dia manome toky fa ny fahalalana fototra SEO dia tena manan-danja indrindra mba hahazoana ny fiheveran'ny mpiserasera ary hanatsara ny fahitana ny tranonkala e-commerce amin'ny fotoana tena izy.
Ho an'ny mpandrindra SEO, manatsara ny tranokalanao ho mora kokoa ny navigation sy ny spider crawling dia afaka mahazo anao fifamoivoizana marina. Ny fanentananao an-tserasera dia tsy voatery ho toy izany. Inona ny fikarohana? Ity no iray amin'ireo fanontaniana izay nanaparitaka ny sainan'ny mpilatsaka an-tsarimihetsika fikarohana momba ny fanatontosana asa amin'ny famokarana vokatra an-tserasera.
Fahatakarana ny fototry ny SEO
Raha ny mikasika ny fifandraisana amin'ny besinimaro sy ny marketing ara-nomerika dia tsy azo tsinontsinoavina ny fahatakarana ny anjara botsika sy ny spider ao amin'ny vondrona misy anao. Ao amin'ny marketing, ny fikarohana sy ny botso dia manampy amin'ny fampidinana ny tranonkala sy ny blôgy. Ho an'ny mpangataka, ny fisavana dia midika fa afaka mahita ireo rohy ao amin'ny tranonkalanao mora foana ny motera fikarohana.
Ny fitaovam-pikarohana dia mandefa fandaharan-draharaha toy ny bots and spiders mba hanondroana ny tahirin-tsarinao sy ny tranokala ary ny tranonkala. Ny olana sasantsasany dia manahirana amin'ny fitadiavana fitaovana hamerenana mitsidika ireo tranonkala sy rakitra. Raha mitranga ny tranga toy izany, dia tsy hita ao amin'ny tahiry fototra ny pejy ambony anao. Ho ela velona, ny mpitsidika dia tsy afaka miditra amin'ny votoatinao amin'ny valin'ny fikarohana.
Mety tsy hikorontana mora ny tranonkalanao raha tsy mitantana ny tranonkalanao. Amin'ny maha mpanentana ara-barotra azy, dia aza avela hiditra amin'ny sasin-tsarimihetsika ny sasantsasany amin'ny fikarohana. Ireto misy hadisoana iraisana nataon'ireo webmasters sy mpanolotsaina ara-barotra amin'ny sehatra SEO.
Ampidino ny rohy mankany amin'ny raki-peo
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny Google Incorporation dia niasa tamin'ny fanampiana ny botsika sy ny spiders hanamarinana ny rakitra flash. Na izany aza, mbola mitohy ny tetikasa. Ny fampidirana rohy mankany amin'ny rakitra flash dia mety hanimba tanteraka ny asanao ara-barotra amin'ny alàlan'ny fametrahana ny tranokao ambany ambany amin'ny algorithmes.
Ny rohy fanoratana voarakitra ao anaty endrika
Ny fampidirana rohy ao anatin'ny endrika dia fomba iray izay ahafahanao mamorona ny teny fanalahidinao izay miovaova farany amin'ny algorithm. Ny fandefasana endriky ny famakiana votoaty dia mety ho fientanam-po lehibe ho an'ny sasany amin'ireo mpampiasa anao. Ankoatra izany, ny rohim-pifandraisana ao anaty endriny dia manjary sarotra ho an'ny fitaovam-pitadiavana hampifanaraka ny votoatinao.
Torohevitra momba ny fomba hanamboarana ny tranokalanao
Ampiasao ny sora-baventy na ny footer mba hamoronana rohy ho an'ny pejy Internet anao
Mamolavola sy mametraka rohy mifandraika amin'ny pejy manan-danja
Hamafiso ny tranokalanao amin'ny code CSS ary mamorona singa fitaovana